Unicef: Ụmụaka ruru puku 88 nwere ike ịnwụ n'oke agụụ - BBC News Ìgbò
Unicef: Ụmụaka ruru puku 88 nwere ike ịnwụ n'oke agụụ
Nkenke aha onyonyo ọtụtụ ụmụaka na ụmụnwaanyị dị ime na-arịa oke agụụ nmpaghara ugwu-awusa ebe ndị Boko Haram na-akpa ike
Otu mba ụwa na-ahụ maka ọdịmma ụmụaka nke a kpọrọ Unicef n'aha ịchafụ ekwuola na ụmụaka ruru puku 88 nọ n'etiti ọnwụ na ndụ n'ihi ọrịa erighị nri nke ọma nke a kpọrọ 'Severe Acute Malnutrition' na bekee.
Oke agụu a dị na mpagara Ugwu Awụsa ebe ndị oyiegwu Boko Haram na-akpa mkpamkpa.
Ihe dịka otu nde ụmụaka dị bido n'ọnwa isii rue ọnwa iri ise na itoolu na steeti Borno, Adamawa na Yobe ebe ndị Boko-Haram na-akpa mkpamkpa na-arịa oke agụụ.
Naịjirịa nọ n'ọkwa 11 n'ọnwụ ụmụaka - Unicef
Onyeisi ọrụ Unicef na Borno steeti bụ Geoffrey Ijumba, kwupụtara na Maiduguri na mmechi ọgbakọ nkuzi abali ise maka ihe mmadụ na-eri nke ha mere, na otu n'ime ise ọbụla na ụmụaka puku 440 na-arịa oke agụụ nọ n'etiti ọnwụ na ndụ ma ọ bụrụ na ha enweghị ezi nleta.
O kwukwara na ụmwụnwaanyị dị ime na ndị na-enye nwa ara dị puku narị abụọ, na iri atọ (230,000) na arịkwa ọrịa erigh ezi nri, ebe otu nde na ọkara mmadụ enweghị ezi mmiri ọṅụṅụ na Borno, Adamawa na Yobe steeti.
Ọ gwara ndị sonyere n'ọgbakọ nkuzi ahụ ka ha kwado mbọ steeti na-agba iji nyere ụmụaka aka ka ha nweta ezi nri ga-eme ka ha too ma mụta akwụkwọ ọfụma iji nyere obodo ha aka.
Chekwanu ọchịchị onye kwuo uche ya